Semalt: Indlela yokukhupha i-Query Parameters Ukusuka kwi-Google Analytics
Xa ukwakhiwa kwewebsite kunye nokuzilungiselela kwiinjine zokukhangela, abalinganiswa beembuzo ngenye yezinto ezingenza isayithi ihluleke ukubeka kakuhle kwiindawo zokukhangela ze-injini. Kuzo zonke ii-start-up zoshishino kwi-intanethi, ukwenza i-website ye-yorhwebo ingaba enye yeendlela eziphambili zezoshishino ezikhoyo. Ngokomzekelo, amashishini anokukwazi ukufikelela kwiimakethe ezingapheliyo kwiimveliso zehlabathi ngokusebenzisa ezinye iindlela zokuthengiswa kwe-intanethi. Ukuthengisa idijithali kunokubandakanya iindlela ezininzi zokwenza iwebhusayithi kunye neziqulatho zihlangabezane nabamkeli bayo - data cabling installation costs. Kungenzeka ukuba usebenzise ukuSebenza kweeNjini zoKhenketho kwiwebhusayithi kwaye ulandele itrafikhi kwi-SERP ye-organic yegama elithile elingundoqo.
Umphathi weMatriki oPhumeleleyo we-12 (Semalt IiNkonzo zeDivart, uJack Miller, uchaza apha ngezinye iimeko eziphosakeleyo malunga nokungabandakanyi iiparitha zemibuzo evela kwi-Google Analytics.
Ukuthengiswa kweDavidi yinkalo ebanzi yemisebenzi. Bonke babonakala benento yokwandisa ukubonakala kwewebhusayithi yakho kunye nokufikelela kubaxhasi abaninzi. Ezinye zezicwangciso ezinikezelwe kwicandelo lokuthengisa (digital) liquka ukulungiswa kweenjini zokusesha, ukuthengiswa kokuqukethwe kunye nezinye iiplani ezifana ne-Social Media Marketing (SMM). Ukungafani nemigqaliselo yemibuzo inceda zonke ezi nkqubo zifezekise iinjongo zabo kakuhle ngaphandle kweentsimbi..Kwezinye iimeko, zinokufaka isandla ekuphuculeni ukhuseleko lokusebenzisa iwebhusayithi yakho.
I-spam yokudlulisa ingxaki yinto eqhelekileyo ejongene neninzi yabasebenzisi be-intanethi. Ukubaluleka kogaxekile ukususela kwi-website yokusetyenziswa kubalulekile. Ugaxekile unokuququzelela i-Trojans kunye ne-malware engakwazi ukuphazamisa ukhuseleko lokusebenzisa isayithi lakho. Kwamanye amaxesha, kubalulekile ukukhuthaza uluntu lwakho ekuhlaselweni kogaxekile lwe-spam olungenza ukuba i-akhawunti yomsebenzisi ikhuseleke. Izihlungi zogaxekile eziqhelekileyo kunye nokunamathela kwamanye ama-anti-spyware ziyakwenza ukuba kubekho ukuhlaselwa kogaxekile. Kubalulekile ukuba ungabandakanyi iimpakethi zemibuzo kwi-Google Analytics ukulawula ugaxekile wokuthumela. Kwezinye iimeko, abasebenzisi banokufumana ithuba lokukhusela xa bekhangela iwebhusayithi yakho. Njalo khumbula ukuba ukhuseleko lwewebhusayithi yakho kunye nolwabasebenzisi luxhomekeke kumanyathelo akho okukhusela.
Indlela yokukhupha iiparitha zeembuzo
Unako ukukhuphela iiparitha zeembuzo kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics ngokungena ngemvume kwipaneli yakho yomlawuli. Ukusuka apha, unqakraza i-akhawunti uze ukhethe umbono. Kwipaneli yokukhanya, unokuklikha izitoreko zokujonga. Le ndawo unako ukukhuphela ngaphandle iiparameters zombuzo ozifunayo kwiqela leembono zeGoogle Analytics. Xa wenza le nguqulelo, kubalulekile ukucofa iqhosha lokugcina ukuqinisekisa ukuba ukulungiswa akuyi kuguqula. Le nkqubo inokuba luncedo kwiwebhusayithi yakho.
I-Google Analytics inquma ulwazi lwayo lweetriki ukusuka kwezinye ii-URL ezilayishiwe. Kwezinye iimeko, kunokwenzeka ukufaka isihlungi se-spam ye-Google Analytics yokubhenela ukuba ungabandakanyi ukutyelelwa kwewebhusayithi. Kulo mlinganiselo, abasebenzisi banokwazi ukwenza ukutyelelwa kweewebhu ngokusemthethweni kunye nezinye iintlobo zeziganeko kwiwebhusayithi. Iiparameter zeemfuno zenye yeendlela osebenzisa ngayo i-Google Analytics ukulawula ulwazi kunye neemitha zeesayithi. Iinkampani zisebenzisa olu lwazi ukubanceda ukubeka iiwebhusayithi zazo eziphezulu kwiinjine zokukhangela.